New Year Resolution Quotes With Greetings | Jabulela unyaka omusha 2021
Ukucabanga ngokwakha izinqumo zonyaka omusha, ie isinqumo sonyaka omusha esichazayo lokho empeleni kulula. Ukunamathela nje kubo kodwa lokho kunzima. Noma ngubani angabhala uhlu lwe ”Kumele -Do's” futhi “Okufanele ukwenze” kepha empeleni, bangaki abangahamba ngenkulumo uma kukhulunywa ngokulandela okwethu izinqumo…Kuthatha amandla amaningi okuqina namandla kuhlanganiswe nokuzimisela ukufeza ‘uhlu’ izinqumo – ekupheleni kosuku ngalunye. Manje nazi izindaba ezinhle zokuhlelwa kwesinqumo sonyaka omusha kanye ne-pragmatism ingakubona ngezixazululo zakho futhi ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ngabe usuphenduke ikhasi elisha, usuku ngesikhathi -za lokhu Jabulela unyaka omusha!
Bheka imibono yeSinqumo sonyaka omusha
1. Uhlu Lulula :
2. Ungaqhathanisi :
3. Iba nguwe :
5. Lalela Inhliziyo :
6. Ukhiye :
Izilinganiso Zonyaka Omusha Zokuxazulula
Isixazululo Sonyaka Omusha Meme
Setha icwecwe, imigomo elula ukulawuleka ukuqala ngayo. Uma uzibona wakha i-Eiffel Tower enesethi ye-lego unayo, kuyacaca ukuthi ukudumazeka ngeke kube kude.
Izilinganiso Zokulungiswa Zonyaka Omusha Ezihlekisayo 4
Memes Yonyaka Omusha
Leli isu elijwayelekile uma kukhulunywa ngezinqumo zonyaka omusha. Okungahle kusebenzele umngani wakho noma indawo yangakini kungahle kungakusebenzeli kahle lokho, lokho ngoba nje ungumuntu oyingqayizivele onohlaka oluhluke ngokuphelele kwezenhlalo nezengqondo. njengokucatshangelwa kwesithupha ngakunye komuntu ophilayo kuhlukile. Bese izinto ezibaluleke kakhulu. Umakhelwane wakho noma ojwayelene naye kungenzeka ukuthi usebenzela enhlosweni efanayo ngesizathu esihlukile ndawonye ukuxazululwa konyaka omusha
Iqiniso lokuthi awukashadi noma usebudlelwaneni, qala ngokuzikhuthaza / ugqozi ngokwakho. Bheka ngaphakathi, ungabheki lokho ongenakho. I-Introspect, zibuze imibuzo embalwa efana – Ngijabule ngempela ngami ? (Yisho yebo, konke kuncike ekucabangeni) Yini engingayithuthukisa ? ke okubalulekile ukuthi – Ukuphathwa kwesikhathi. Ngaphandle kokuthi uzibekele eceleni ingxenye yosuku, ngakho-ke kuseduze okungenakwenzeka ukwakha umuntu ojabulayo, indlela yokuphila enempilo ! zitholele isikhathi. (izinqumo zonyaka omusha)
Izilinganiso Zokulungiswa Zonyaka Omusha Ezihlekisayo 1
4. Bandakanya ngokomoya :
Ukucindezeleka yikho okudala kakhulu & isitha esisha nesinesiqiniseko sonke okufanele sihlangane naso ku-avatar ethile noma kwenye indlela yethu yokuphila ematasa. Kukhona nokho ikhambi – ibizwa ngokuthi Ukuzindla abanye abangakubiza ngokuthi kungokomoya. Lokhu akusho ukuthi kufanele ukhiphe amakhulu amadola / ama-rupee ekilasi le-Yoga lakamuva . Ubuhle bokuzindla bokuthi ungazijwayeza ngisho nasekhaya, noma ngisho nasemsebenzini wakho. Akugcini ngokunikeza ukuzola engqondweni, futhi kuyasiza ekwenzeni ngcono impilo yakho yonke.
Bamba iqhaza emphakathini wangakini, abangane noma thintana nenhlangano esiza abantulayo noma engenzi nzuzo, asebekhulile noma ngisho nezilwane – uma ungumthandi wemvelo. Bavakashele njalo noma kanye ngesonto bese usebenzisa isikhathi sakho ngokungazideli, uzomangala ngomehluko owenzayo. Kunezinto eziningi kakhulu ezingenakuthengwa ngemali futhi kulapho uzokuthola khona! Nikela ngezingubo zakho ezindala, ifenisha, izincwadi, izinto ezisetshenziswayo njll ezinhlanganweni zosizo, esikhundleni sokubalahla.
Izilinganiso Zokulungiswa Zonyaka Omusha Ezihlekisayo 2
Vala amadivayisi wakho weselula kaningi futhi uphumele ngaphandle ngaphandle kwawo isikhashana nsuku zonke. Cisha umhlaba we-imeyili kanye ne-inthanethi bese ubingelela umakhelwane wakho. Umsebenzi ubalulekile – kepha ukugcina impilo ngokulinganisela kubaluleke kakhulu! futhi ingasetshenziselwa ama-eseyi wokuxazulula unyaka omusha
Noma yini i- Izinqumo zonyaka omusha setha, kungaba ukwehlisa isisindo noma ukufunda noma ukuqina komzimba, gcina umkhondo wenqubekela phambili yakho futhi ungakhohlwa ukuziklomelisa noma kunini lapho ufeza ingqophamlando. Uma uzizwa ukhathele noma wehliswa amandla ngezikhathi ezithile, khumbula ukugcina okuthunyelwe okuncane- iyabonakala enezintambo ezilungile ezifana ne ”Ungakwenza!” futhi ” Qhubeka – ucishe wafika!”
Enye yezinto ezinkulu kakhulu isinqumo sonyaka omusha sokunciphisa isisindo
Ngikufisela okuhle kodwa okusha kulo nyaka omusha!!!
Izilinganiso Zokulungiswa Zonyaka Omusha Ezihlekisayo 3
“Noma ngabe yini oyesaba ukuyenza, Kwenze. ”
― UNeil Gaiman
“Izifiso zingenzeka. Dare ukwenza isifiso. ”
― ULailah Gifty Akita, Cabanga Okukhulu: Yiba Omkhulu!
“Ngoshintsho, ungangezi izinto ezintsha empilweni yakho njengesinqumo sonyaka omusha. Esikhundleni salokho, yenza okuningi kwalokho osekuvele kukusebenzela uyeke ukwenza izinto ezimosha isikhathi.
“Ngabe abacebile bazoqhubeka nokuceba ngonyaka omusha? Ngabe abampofu bazoqhubeka nokuhlupheka kuNyaka Omusha? Lapho-ke ngenxa kankulunkulu kanjani emhlabeni uNyaka Omusha uzobizwa ngokuthi musha?”
― UMehmet Murat ildan
“Unyaka omusha yindlela entsha yokumema uguquko, ukuchichima nokuchuma kuyo yonke impilo. ”
― U-Amit Ray, Ukuthula Bliss Ubuhle Neqiniso: Ukuphila ngePostivity
“Noma ngabe kuyaphoqwa noma kuyamenywa, ushintsho alunakugwenywa. ”
― U-Andrena Sawyer
ezihlekisayo New Year Resolution Meme
Categories 2021, Happy New year, New Year Quotes Tags Isixazululo Sonyaka Omusha, New Year Resolution greetings, New Year Resolution quotes Post navigation
101+ Jabulela unyaka omusha 2021 Quotes With Images
Izithombe zangemuva ze-Facebook ze-HD
2 thoughts on “Isixazululo Sonyaka Omusha 2021”
Pingback: Jabulela unyaka omusha 2020 Wishes Greetings - Jabulela unyaka omusha
Pingback: Jabulela unyaka omusha 2020 Sanibonani - Jabulela unyaka omusha